50 Yakanaka Uye YeRudo Nzira dzekushamisa Wako Musikana - Ukama
50 Yakanaka Uye YeRudo Nzira dzekushamisa Wako Musikana
Unoda musikana wako.
Iwe uri zvachose musoro pamusoro pezvitsitsinho kwaari.
Uye, kana iwe uchitendeseka iwe pachako, uri kuwana zvakaoma kufungidzira hupenyu husina iye.
Iwe unogona kunge wanga uri muhukama kwemwedzi, gumi, kana kunyange hupenyu hwese, asi iwe unoda kumuratidza kuti unomuda zvakadii.
Kana iwe uri kuverenga izvi, mikana ndeyekuti iye akanaka pakushamisa iwe uye nekuita kuti unzwe kudiwa, uye iwe unoda kudzorera kufarirwa.
Usambotya! Semukadzi asingade chero chinhu chiri nani kupfuura kushamisika kwerudo, ndaisa pamwechete rondedzero yezvinhu zvaunogona kuita kushamisika musikana wako.
Inosanganisira zvese kubva pane zvinotapira, zvidiki diki zvaunogona kushandisa kumuratidza kuti anokosheswa sei chero nguva…
… Kune akakurisa iwo aunogona kudonhedza mukati mega zvino neapo.
1. Siya zvinyorwa zvake
Kana iwe wakarara pamusoro pake uye iwe uri wekupedzisira kubuda mangwanani, siya katsamba pashiro kuti iye adzokere pakupera kwezuva.
Muudze kuti akangwara sei, akanaka sei, kana kuti unodada naye.
Muudze imwe yeiyo zvikonzero zvekuti unomuda . Kana, bvarura yako (inoshamisa, ndine chokwadi) hunyanzvi hwekudhirowa uye utaure pachako nenzira iyoyo.
2. Ronga kushevedzera pawairesi
Zviteshi zvakawanda zvine nguva yenguva yezuva apo vateereri vanogona kutumira mameseji kune vamwe vanhu. Ita chimwe chinhu chipfupi asi chinotapira, uye muudze kuti aite kana iwe uchiziva kuti ichaverengerwa.
3. Taura zvaunonzwa mupepanhau remunharaunda
Mapepa mazhinji emuno ane chikamu chezviziviso, asi iwe haufanire kuzivisa chero chinhu kunze kwekuda kwaunoita uye kutarisira musikana wako kana kuti anotyisa sei. Tora kopi, chiisiye yakavhurika pane peji rekurudyi, uye dhonza denderedzwa kutenderedza meseji yako kuti aione.
zvaunofanira kuita kana iwe usinga nzwe kudiwa
4. Viga zvinyorwa kana zvipo zvidiki kuti awane
Iwo manotsi haafanire kungomirira pamubhedha wake. Kana aenda kubasa, pop imwe muhomwe yake, mukati nekudya kwake kwemasikati, kana pakati pemapeji ebhuku rake.
Kana achienda, viga chipo chidiki kana pikicha yevaviri venyu musutukesi yake kuti azvione paanosvika.
5. Nyora tsamba yerudo
Manotsi asiri kuzviita kururamisira? Enda kune yakazara-pane yerudo tsamba.
Kuti uwane mamwe mapoinzi, tumira neposvo kuti isvike paanga asingatarisiri.
6. Mutumire maposikadhi
Kana iwe ukaenda kune imwe nzvimbo usina iye, tumira iye kadhi-kadhi uchimuudza iwe unoshuva kuti dai aripo.
7. Nyora nhetembo kana rwiyo
Kana iwe uine chero mapfupa ekugadzira mumuviri wako, saka usanyara. Vashandise!
Nyora iye sonnet. Kana, kana iwe uchibatsira uine gitare, wadii kuenda kunze uye kunyora rwiyo?
Asi iwe haufanire kuti uzviite iwe pachako. Kune vazhinji vadetembi kunze uko vangangodaro vatove akataura manzwiro urikuedza kuyambuka.
Tsvaga pamhepo, wobva wanyora nhetembo ugozvitumira neposvo. Kana kuti zviitire iye.
Kana iwe uchiziva kuti ane mudetembi waanofarira, ndiyo inonakidza nzvimbo yekutanga.
Pamberi penziyo, kana iwe uchikwanisa kutamba kana kuimba, asi uchiwira padambudziko rekunyora, kududzirwa pamoyo kwerwiyo rworudo kupemberera chiitiko chakakosha kunogara kuchidzika zvakanaka.
8. Ita basa raunoziva kuti rinoda kuitwa
Kana muchigara pamwe chete, ipapo imi vaviri muchave kukamura mabasa epamba zvakaenzana ...
… Asi kana iwe uchiziva kuti pane chimwe chinhu chaanofanirwa kunge achirwisa chaanovenga, uye icho iwe chaunogona kumuitira zviri nyore, ndicho chishamiso chaicho chaanozokoshesa.
Kana musingagare pamwe chete, zvinozotonyanya kukosheswa. Ita uchisuka, sungirira kunze kwekuwacha, kana pop kuzvitoro.
9. Zvipo zvinogona kuve zvekare, asi zvakasarudzika
Kana uchida kumuwanira chimwe chinhu chechiitiko chakakosha, kana nekuda kwekuti unomuda, ipapo maruva ane stereotypical, machokoreti, uye matoyi ane cuddly inogona kunge iri zano rakanaka ...
… Chero bedzi iwe ukaisa icho chidiki chidiki chekufunga mairi, uye womutorera chimwe chinhu chaunoziva chaanoda.
Kana ari fan of chocolate yakasviba, riite iro bhokisi re organic yakasviba chokoreti truffles.
Kana achinetseka nemaruva ezuva, mutorere maruva awo.
Izvi zvipo zvinofadza paZuva raValentine kana zuva rake rekuzvarwa, asi zvakanakisa sekushamisika kana iye asingatombozvitarisira kana kuda zvishoma zvekutora.
Sekune mamwe marudzi ezvipo anoenda, tarisa pamunhu.
Tenga matikiti ake kukonzati nebhendi raanofarira kana bhuku razvino remunyori waanofarira.
Muratidze kuti unomuteerera uye unomuziva.
10. Ita kutsvaka hupfumi
Chero chipo chingagone kuitwa chakatonyanya kukosha kana iwe ukamuita kuti atevedzere zvimwe zvinoratidza kuti azviwane. Izvi zvinogona kunge zvakakomberedza yako / yake furati kana kunyangwe kunze kana iwe uine imwe nzvimbo yakanyarara kwaunogona kusiya zviyeuchidzo uye uzive kuti hazvizovhiringidzike. Zvinonakidza uye iwe unogona kuita zviyeuchidzo pachako kwaari kana hukama hwako.
11. Mutengere mbatya dzemukati kana mapijama
Ipo isu tiri panhau yezvipo, zvipfeko zvemukati inzira yakanaka yekumuratidza kuti unonyatsomuziva sei uye unova nechokwadi chekuti uri mupfungwa dzake pese paanozvipfeka.
Kana usiri kunyatsoziva nezvehukuru kana kutya nezve chipo chepedyo zvakadaro, saka mapijama emhando yepamusoro anenge akapfimbana, uye pamwe chimwe chinhu chaanozvitengera iye!
12. Muitire iye wemazuva ano musanganiswa tepi
Makatepi haachashandi zvakanyanya, uye maCD ari kuwedzera kudzoka, asi unogona kumushamisa nerunyorwa runyorwa ruzere nenziyo dzaunoziva kuti achazoda kana dzinokuyeuchidza nezvake.
13. Ita icho chinhu chimwe chete chawakagara uchitaura nezvacho
Pane here chimwe chinhu icho imi vaviri chawave uchitaura nezvacho uchiita kwenguva yakareba sezvaunogona kurangarira?
Tora rakakiiwa mudhayari. Muratidze kuti hausi mese kutaura, asi unogona kutora matanho futi!
14. Ita zvirongwa izvo zvinoshandisa kushandisa yakanaka nguva, kwete yakawanda mari
Iwe haufanire kushandisa yakakura mari yemari kuti muve nenguva yakanaka pamwe chete.
Sezvavanotaura, zvinhu zvakanakisa muhupenyu zvinowanzo kuve zvemahara. Ita marongero anosanganisira kuwedzera kushanda pachikamu chako uye mashoma mashandisiro.
Wese munhu anokoshesa kushanda nesimba. Musikana wako ane chokwadi chekuti.
15. Ita PDA
PDA inomirira kuratidzwa kweruzhinji kwerudo, uye kana usingawanzo mhando yekumubata ruoko kana kumutsvoda pamberi pevamwe, ichi chiito chidiki chichava chakakura uye chinogamuchirwa kushamisika kwaari.
16. Muendese kunzvimbo inonyura zuva
Wakapedzisira rini kutarisa zuva rovira pamwe chete?
Kana iwe usingakwanise kufunga nezve inonakidza yekuvira kwezuva nzvimbo iwe pachako, saka bvunza shamwari dzako kana iwe ungatobvunza Google.
Rongedza zvinwiwa zvinotapira uye bhodhoro rechimwe chinhu chakakosha uye tarisa zuva ronyura mune kambani yemukadzi waunoda.
17. Tora wake waanofarira celeb kumutumira meseji
Zvakanaka, iyi inogona kunge iri refu pfuti, asi mubayiro unenge uri muhombe. Zviwanire paTwitter kana Facebook kana Instagram, utsvage waanofarira muimbi, bhendi, mutambi, nyeredzi yemitambo, kana humwe hunhu hwakakurumbira, uye uvabvunze kuti vanyore meseji ipfupi yevhidhiyo yemusikana wako. Unogona here kufungidzira chimiro chechiso chake…? Iwe hauzomboziva, mamwe macelebs anofarira kuita zvinhu zvakanaka kune avo vakuru vateveri.
18. Gadzira dambarefu kana pikicha
Arubhamu yemifananidzo chipo chakanakisa pachiitiko chakakosha. Anozokoshesa chaizvo nguva nesimba raunoisa mazviri.
Kana iwe ukachengetedza zvinhu senge matikiti etikiti kana maresiti kubva pamazuva akakosha, izvi zvinoita kuti zvinyanye kuve zvemunhu.
Iwe unogona kukurudzira kuti iwe uwedzere kwazviri pamwe chete pamusoro pemakore uye wotarisa apo nyaya yako ichifumurwa.
19. Nyora bhaketi rekufamba
Taura kuti vaviri venyu vaite runyorwa rwezvimbo dzaungade kushanyira mukambani yake panguva yehupenyu hwenyu mese.
Kugadzira runyorwa seizvi kunoita kuti azive kuti iwe unoda kufamba nyika mukambani yake uye kugovana zvimwe zvinoshamisa zviitiko.
20. Muvake kana kumuita chimwe chinhu
Kana iwe uri chero akanaka ane saha kana hunyengeri nemaoko ako, saka wadii kumugadzirira chimwe chinhu?
Ita icho chinhu chaunoziva iye chaanoda, uye iye anofunga nezvako pese paanochiona kana kuishandisa.
21. Mupei massage
Bendekete, tsoka, kana kunyatsozadza muviri pakupera kwezuva rakareba, rakaoma inzira inoshamisa yepedyo yekumubatsira kuzorora uye kuzorora.
Izvo hazvibhadhare iwe chinhu, asi kumupa iye massage paasina kubvunza kuchakunda iwe yakawanda yakawanda brownie mapoinzi.
22. Mumhanyise kunogeza
Kana anga aine zuva rakaomarara, mhanyisa yekugeza inopisa ine dash ye bubble bath uye vhenekera kenduru inonhuwirira.
Ita chero chinoda kuitwa kuve nechokwadi kuti ane awa rerunyararo rusina kudzikiswa.
23. Vhara bhodhoro remvura inopisa pakati pemashizha
Usati waenda kunorara, pisa mvura inopisa uye popa bhodhoro remvura inopisa pakati pemashizha padivi pake pemubhedha kuti umudziirwe iye.
24. Bvisa bvudzi rake
Kuva nebvudzi rako kwakashushikana kunoshamisa kwekuti vakadzi kazhinji vanowana kunakidzwa kwemwedzi yakati wandei kune vanogera bvudzi.
Bhurasha bvudzi rake kuti dzimwe nguva umupe yekuzorodza misoro yemusoro.
Kana kuti ngaaise musoro wake pamakumbo ako nekupuruzira vhudzi rake pamunenge muchizorora manheru.
Tora mwana muzita rake
Kubva pane koala dzinokatyamadza kusvika kune tiger dzinotyisa, kune akawanda masangano anokutendera iwe nenzira yekufananidzira 'kutora' mhuka kuti uwane mari. Kana musikana wako ari mukuchengetedza mhuka dzesango kana ane mhuka yaanofarira, iye achada izvi!
Maitiro Ekuita Musikana Wako Musikana Anzwe Akakosha, Akakosha, Uye Anodiwa
Mibvunzo 115 Yekubvunza Wako Musikana Wemusikana
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kudanana kune Wako Partner Uye Uvaitise Ivo Kuti Vadzokere
9 Hukama Zvinangwa Vaviri Vakaroorana Vanofanira Kumisikidza
Zvinodiwa neVakadzi Mumurume: 3 Zvinhu Zvakakosha Zvinoita Kuti Varume Vavhare
26. Bika chikafu chakakosha
Kana iwe usati wambobika, saka chimwe chinhu chakareruka chinokwana, asi kana iwe uchibatsira mukicheni, tora nguva yekuwana mutsva mutsva uye utenge zvigadzirwa.
Vheneka makenduru mashoma woisa tafura kuti umuratidze chiitiko chakakosha.
27. Mugadzirire mangwanani emubhedha
Zviyo, mbiriso, zvingwa, kofi, muto mutsva - enda kunze uye mutore chikafu chake chemangwanani mumubhedha. Yakavimbiswa kumupa kutanga kwakanakisa kwezuva uye pane zvinogara zvakakwana kuti iwe ugovane. Ita chokwadi chekutsvaira zvimedu kubva pamubhedha mushure!
28. Rongedza pikiniki
Kana iri zuva rakanaka, kana kunyange manheru akanaka, saka hapana chikonzero chekudya mumba.
Rongedza pikiniki yakakosha nezvikafu zvaanofarira, tora gumbeze, uye enda naye kune imwe nzvimbo yakanaka.
29. Enda kubhaisikopo rekunze
Mazuva emamuvhi anonakidza, asi zvakatonyanya kukosha kana iwe uchikwanisa kugumbatira pamusoro pegumbeze rine hamper izere nemaputi uye zvimwe zvinwiwa, uye kubata firimu pasi penyeredzi.
30. Vhenekera kenduru
Chinhu chakareruka sekungobatidza kenduru mumba mako yekurara iwe uchinge uchiona firimu kana kutaurirana kune mumwe zvichimuratidza kuti iwe unoda kuita zvinhu zvakakosha.
31. Mumusiyire mushonga mufiriji
Mutengere iye gwenga iro iwe unoziva kuti anoda kana kuva nechikafu chakagadzirira uye kumumirira mufiriji kuitira kana achinge adzoka kubva kubasa, saka haafanire kubika.
Bhodhoro rinotonhora rewaini rakamirira mufiriji musi weChishanu manheru haisi pfungwa yakaipa, zvimwe.
32. Dzokororazve zuva rako rekutanga
Makatanga kuonana kupi? Wakatanga kupi kuenda kunodya?
Funga kudzokera kumashure ikoko kuti uratidze kuti unorangarira, uye muudze kuti kungwara kwako kwawaifunga sei pawakatanga kusangana.
33. Tora nguva paanenge achirwara
Kana asiri kunzwa zvakanaka, tora mangwanani kubasa kuti uende naye kwachiremba.
Kunyangwe sezvaanogona kutaura kuti akanaka, anofarira kuve newe ipapo kuti umubate ruoko. Kumbira kuenda kukhemisi kana kuchitoro kwaari.
34. Mutorei masikati
Kana iwe uchiziva kuti akasununguka imwe nguva yekudya kwemasikati, wadii kuuya nechikafu kubva kunzvimbo yaanofarira yekudya kwemasikati, kune imwe nguva, yepakati-yezuva-zuva?
35. Kana kumuitira chikafu chakarongedzwa
Kana iwe uchiziva kuti haana nguva yekusiya tafura yake panguva yekudya kwemasikati, wobva wamutakura masikati uye wotambidza iye paanenge achibuda pamusuwo. Pepa chinyorwa mukati imomo kuti chiito chiwedzere kutapira.
36. Mubatsire kunze nezvinhu zvaanowanzo kanganwa
Anogara achikanganwa kuzadza mota yake here? Tenga mushonga wemazino? Bhuka chitima? Zviitire iye.
37. Tora kufarira kwake basa
Kana iwe uchifarira zvechokwadi basa remukadzi, anokuda nezvazvo.
Kana iwe ukaitika kuti ukaona basa raunofunga kuti angafarire, riendese. Kana iwe ukaona chinyorwa chaanogona kuwana chinobatsira, mutumire iye chinongedzo.
38. Taura nezve shanduko pakuonekwa kwake
Akagerwa here? Unobaya here? Kutenga rokwe idzva? Ita shuwa kuti iwe unotaura chero iye ari kutarisa zvakasiyana kana kunyanya anodakadza, saka anoziva kuti unonyatsomuona.
39. Zvirumbidze nezve kukura kwake kushamwari dzako uye nemhuri
Usanyara kuimba nziyo dzake dzekurumbidza kune vamwe kana iye aripo.
Udza vakwanyina vako vakanaka pamusoro penzira yaari kuita nayo mubasa rake, kana kuti vabereki vako kuti akanaka sei mukunyora.
Iye angaite kunge anonyara zvishoma, asi kana ari ekurumbidza kwechokwadi, pasi pasi iye achada kuti iwe unodada naye.
40. Rongai kupera kwevhiki rose pamwe chete
Vharidzira kunze kwevhiki rese, kuitira imi vaviri chete.
Unogona kuenda kumwe kunhu, asi kunyangwe marongero ekuzorora kwevhiki kumba nerudo mafambiro uye husimbe mangwanani uchinakidzwa nekambani yemumwe zvinoreva kuti iwe unogona kuzorora uye kubatanidzazve.
41. Mufonere kungotaura chete
Kutumira mameseji zvese zvakanaka uye zvakanaka, asi kana akasasvika kukuona iwe pachako, ipapo kunzwa izwi rako ndicho chinotevera chakanakisa chinhu. Mufonere mangwanani kuti ungomushuvira zuva rakanaka.
42. Musiye izwi rezwi
Kana iwe usina kusununguka kutaura, asi iwe uchida kumutumira chimwe chinhu chakakosha kupfuura chinyorwa, mazhinji mameseji maapplication anotendera iwe kuti utore uye utumire mameseji ezwi. Anoda kugamuchira imwe yeiyi uye nekunzwa iwe uchitaura zvinhu zvakanaka.
43. Ita chimwe chinhu chakanyanyisa kudanana uye cheesy
Kana iwe uine rudo rusina tariro kuhwanda mukati mako, wobva waita kuti vave nerusununguko rwekutonga nguva nenguva.
Enda seye cheesy uye pamusoro-iyo-pamusoro sezvaunoda, pasina kudzivisa. Funga kudya kwemakenduru-mwenje padenga remba nemimhanzi yakapfava uye boka remaruva.
44. Kumbira kupedza nguva uine mhuri yake
Usamirira kuti akubvunze kana uchida kuenda kunoshanyira mhuri yake. Zvikurudzire iwe pachako, uye muudze kuti ungade kupedza nguva navo.
45. Kanda iye kushamisika pati - kana iri mhando yake yechinhu
Vamwe vanhu vanovenga zvachose kuve pakati pekucherechedzwa, asi kana iwe uchiziva kuti anochida wobva wamurongera kushamisika pati, yekupemberera zuva rake rekuzvarwa kana kugona kukuru.
Ingo rangarira kutarisa kukoka shamwari dzake, kwete zvako chete.
46. ​​Tamba kunge pasina ari kuona
Tamba naye. Tamba naye kumafaro, zvisinei kuti unofunga zvakaipa sei iwe. Ingonakidzwa nazvo.
Ongorora kusaina kumatambi emakirasi. Tamba naye mukicheni. Tamba naye kunyangwe pasina mimhanzi inoridza.
47. Ita kuronga kwerwendo rukuru
Kana wanga uchitaura zvekuenda kune imwe nzvimbo, asi pane zvakawanda zvekuronga zvinobatanidzwa, saka ita ongororo.
Tarisa uone chekufambisa, pekugara, uye zviitiko uye wozozvipa zvese kwaari, zvakagadzirira kunyoreswa.
Izvo zvinotora kushushikana kwese maari kwaari, uye zvinoreva kuti anogona kungozorora nekunakidzwa.
ndinogara ndichida kuva ndega
48. Bhuka zororo, asi chengetedza kwainoenda zvakavanzika
Zviripachena, iwe unofanirwa kumuudza iye kuti urikuenda kumwe kunhu kuti agone kugadzirisa nguva-yekubva.
Asi, kana achifarira kushamisika, wadii kumirira kusvika nhandare usati wamuudza kuti muri kuenda kupi?
Ingo ita shuwa kuti iwe unomurega azive mbatya dzekutakura!
49. Paradzira maruva peturu pamubhedha
Inotapira, asi inoshandawo. Tenga mamwe maruva uye utore maruva mashoma kuti ushandure imba yako yekurara ive yerudo, nzvimbo yekuzorora. Kana uine maruva akasara, aise muhari patafura yemubhedha wake.
50. Hire ngoro inodhonzwa nemabhiza
Mutore kuenda kuguta hombe kana guta padhuze newe uye utsvage kambani inopa vatasvi vemabhiza anotasva bhiza. Nakidzwa nekuona uye ugovane munguva iyo iwe paunoteedzera uye kukwatirana mumigwagwa.
Iva wepamoyo , uye teerera kune zvakadzama
Kana iwe uchida kuratidza musikana wako kuti unomuda zvakadii tora mukana wese unozviratidza, uye usanyara.
Teerera kune zvinhu zvaanokuudza uye rangarira zvinhu zvaanoda kuitira kuti iwe ugomushamisa nenzira dzaanoda zvakanyanya.
kana murume achipisa uye achitonhora
maitiro ekuita kuti svondo ripfuure nekukurumidza
zvinhu izvo nyika inoda kuchinja
kusaina baba vasina murume vanokuda
kuudza mumwe munhu kuti wakavanyepera